Astaamaha guud - Geofumadas
Maarso, 2015 Geospatial - GIS, GPS / Qalabka, egeomates My
Markii aan akhriyey aragtiyaha kala duwan oo taageera isgaarsiinta ku lug khariidaynta labadaba sida sayniska si ay u matalaan ifafaale juqraafi sida farshaxanka macluumaadka this siin bilicsanaanta loo baahan yahay, waxaan ognahay in waqtiga aan ku nool nahay waxaa ka mid ah falalka kala duwan ee nolol maalmeedka halkaas oo aanu u isticmaali georeference sida tallaabo maalin kasta.
Laga soo bilaabo marka aan soo jeedin on qalab mobile, macluumaadka aan diro ama la helo waxa uu la xidhiidhaa georeferencing: Cimilada, wararkii ugu dambeeyay, shabakadaha bulshada, la tashiga map, dardargelinta GPS ama calaamadeynta ee images. Waxaa cad in this uma aan iman in habeen, had iyo jeer in ay aragti ah waxaan u leeyihiin in ay ku nool yihiin daqiiqad aan horay loo arag, inkastoo aan la aqoonsado awooda ku dhow xad lahayn of aadanaha si been abuurtay isagoo, waa wax aan macquul aheyn in la qiyaaso waxa laga yaabaa in dhacaya 25 sano ka dib. In si la mid ah laga yaabo in mid ka mid ma malayn 25 this sano ka hor, gaar ahaan waqti marka tiknoolajiyadda macluumaadka iyo computer science ku aheyn massification ee hal-abuurnimo si dheeraysa ugu isticmaalka maalin kasta.
Inkasta oo shuruudaha daba-galka ah uu ahaa ficil dabiici ah oo bini-aadannimo ah, si ay u tixgeliyaan aqoonsigooda qalabka ama khariidada daabacan, muddo dheer waxay ahayd waxqabad khaas ah iyo in la helo kaliya koox dad ah oo mudnaanta leh. Sidaas daraadeed falanqaynta qaybaha gaarka ah ee Geo-ku-tixraaca waa mid muhiim u ah go'aanka gaar ahaaneed iyo qorsheynta waxyaallaha kale ee dhacaya sanadaha soo socda. Aynu aragnno ka dibna saameyn ku yeesha arrintaan.
Sidee baa jariidadu u noqotey mid qarsoodi ah?
Sababtu waa sahlan tahay mabda'a: maxaa yeelay deegaanku waa qeyb ka mid ah nolol maalmeedka. Maalin kasta waxaan u baahan nahay inaan ku dhaqaaqno jawi saddex-geesood ah, halkaas oo aan u wadno labaatan baloog dhanka midig, lix bidix, waxaan u dhaadhacnaa laba heerar si aan gaariga u dhigno oo aan ugu tagno afar heer oo aan uga shaqeyno xafiis. Waxaan tan ku sameyn karnaa maalin kasta iyo markii aan u baahan nahay inaan ku sifeyno warqad warqad ama aan ku sawirno xayeysiiska, waa marka aan aad uga warqabo. Laakiin juquraafigaas muddo dheer wuxuu ahaa mid maxalli ah iyo dan shaqsiyeed, sidaa darteed waxaa loo qabtay sidii hawl maalmeedka.
Kanakubo (1) wuxuu sharxayaa wargeyskiisa ku saabsan Horumarinta Casriyeynta casriga ah, in horumarinta aragtida sawir qaadashadu ay la xiriirto danaha kuwa muhiimka ah waqtiyada gaarka ah; tusaale ahaan, xudduudaha fashilmay, kooxaha miliishiyada ah ee dagaalladu ka socdaan, ama dhaqaalaha caalamiga ah. daqiiqado Kuwa abuuray baahida loo qabo in la arko georeference la gaari karin oo ka baxsan heerka maxaliga ah, sida dalalka deriska ah, qaaradda iyo sida waa la ruxruxo hadda: fikirka caalimiga.
Xilliga aan hadda ku noolahay, wuxuu ka dhigayaa xiisaha uu ku hayo adduunyada isku xiran, wuxuu u baahan yahay isticmaalka marxaladaha kala duwan ee barokacayaasha. Just in uu yahay waxa keenay dhinaca jaleelada, dukaamada ugu baahan tilmaan halka goobta ay yihiin, macaamiisha u baahan tahay si ay u gaarto, saarayaasha technology qaataan si ay u horumariyaan codsiyada, Academy waxay bixisaa waxbarashada duwan ee ku yaala goobahan iyo tartanka keentaa Cusbooneysiinta dadka isticmaala. Dabcan, isticmaalaha kama dambaysta ahi xitaa ma ogaanno tan, taasina waa waxa aan ugu yeerno Intrinsic, maxaa yeelay waxay ku jirtaa nolol maalmeedka.
Waxaa jira sababo badan oo aan rumaysanahay in tani faa'iido leedahay, inkasta oo aan ka hadli doono khatarta. Marka laga eego aragtida kuwa dhaqaalaheena ka haya sayniska iyo tignoolajiyada macluumaadka juqraafiga, faa'iidada ugu weyn waxay ku jirtaa baahida sii kordheysa ee adeegyadayada. Haddii aan horumarinno codsiyada, tababarka, iibinta alaabooyinka ama adeegyada, xaqiiqda ah in georeferencing ay muhiim u tahay waxtarka.
Laakiin ka baxsan danaha gaarka ah, faa'iido muhiim ah ayaa ka jirta helitaanka codsiyada bani'aadamka, maalin kasta oo leh hawlo badan oo ku salaysan geolocation. Aynu aragno sida ay u sahlan tahay hadda in la raaco iyadoo la isticmaalayo caawiye GPS ah oo laga heli karo baabuurka, kana feker fursadaha aan la helin iyo in safarka uu ahaa sababo degdeg ah. Waxaan sidoo kale arki karnaa faa'iidada isticmaalaha isticmaali kara badeecadeeda geoport internet, kaas oo ay soo iibsadeen macaamil ka baxsan waddanka, iyada oo aan lahayn xiriir toos ah.
Dhaqanka laxiriira geo-engineering waa caddaynta faa'iidooyinka geolocation. Kooxaha ku lug leh qabashada macluumaadka berrinka, maalin kasta waa qiimo badan. Laakiin sidoo kale maalin kasta waa ay adag tahay in la ogaado xuduudaha u dhexeeya garoonka iyo golaha wasiirada, iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in georeferencing ay ku xiran tahay qabashada, qaabaynta iyo hawlgalka kaabayaasha. Heerarka sida BIM (2) waxaa loola jeedaa in la geeyo kontroolka dheeraadka ah ee laga fikiray, sida hawlgalka, waqtiga iyo kharashyada.
Waxaa sidoo kale jira faa'iido weyn oo ku saabsan soo saarida macluumaadka maalin kasta oo hufan iyo maalin kasta. Iskaashiga iskaa wax u qabso ee maanta ayaa xiiso u leh horumarinta nidaamyada sida Khariidadaha Furan ee Open Street, oo ah daabacaad caalami ah oo leh sawir qaade kaas oo soo saaray dadweynaha isticmaala iyada oo loo mahadcelinayo jawi loo yaqaan "Crowdsourcing. Tani waxay noqon laheyd mid aan suurtagal ahayn haddii geolokatigu uusan noqon mid dhexdhexaad ah, sababtoo ah si loo soo saaro macluumaadkan, ma ahan lagama maarmaan dadaalka intaa ka sii ficilcelinta howlaha wadaag ee qalabka mobile iyo aqbalida xogta.
Sidaas awgeed haddii aan sii wanaajinno baaxadda faa'iidooyinka ku saabsan geolocation, hubi in liiska uu noqon doono mid ballaadhan. Waxaa si gaar ah diirada u saarnaa dhaqaalaha, maamulka waqti-fiican, wadashaqeyn, nabadgelyo iyo fursadda lagu hormarinayo faa'iidada aadanaha.
Khatarta ka iman karta jahawareerka
Ma aha wax waliba ku noqon doona jawiga jawiga sida aan hubin sida dimoqraadiyada macluumaadka. Waxaa jira khataro la xidhiidha, oo ah qofka dambiga geystay oo keliya caadi ahaan qofka bini'aadamka ah.
Waxaa ka mid ah kuwaan soo sheegi karno, luminta asturnaanta. Xaqiiqda ah inaan ku xiraneyno qalab ku xiran signallada GPS, waxaa ku jira helitaanka macluumaadka geolocation ee mar horeba mid gaar ah. In kastoo laga yaabo inay faa'iido u leedahay qaar ka mid ah in ay ogaadaan halka ay carruurtoodu yihiin, waxay sidoo kale noqon kartaa halis ah dambiilayaasha inay ogaadaan in isla macluumaadkaas. Asturnaanta dhamaadka waa xaalad qaraabo ah oo leh khatarteeda.
Khatarta kale waxay ku jirtaa habka Crampton (3) ee buuga uu ku qorayo sayniska ee la xiriira khariidadaha: wuxuu sheegay inay wax badan ku qaadatay khariidadaha inay helaan tayada iyo taageerada cilmiyaysan ee aan hadda haysanno. Laakiin xaqiiqda ah in la-tashiga iyo jiilka khariidadaha ee adeegsadayaasha aan takhasuska lahayn ay noqdaan ficil u gaar ah, waxay keeneysaa halista luminta tayada ama shuruudaha la dejiyay. Mawqifka waxaa la ogyahay in kolba marka loo eego dhaq dhaqaaqa firfircoonida horumarka cilmiyaysan, ay yaraynayso dadaalka maskaxda sidaa darteedna ay khatar ugu jirto dib ugu noqoshada sirdoonka.
Gebogabadii, gogoldhigga qotada dheeriga ah ayaa ah ku-soo-biirinta shuruudaha kala duwan ee aadanaha, labadaba cilmi, farsamo ama maalinba. Dhibaatadani waxay noqotey mid si toos ah u sameysey heerkale oo aan si toos ah u sameyno. Faa'iidooyinka aad ayay uga weyn yihiin halista, sidaa daraadeed waxaa lagama maarmaan u ah inay noqoto feejignaan isbedelka, labadaba si aad u hesho fursado iyo inaad soo jeediso xalka.
(1) Tositomo Kanakubo, Horumarinta Cartoon The Age
(2) Muuqaalka Aqbaarta Dhismaha
(3) Sida Khariidadu u noqotay cilmi
(4) Waxaa lagu qaatay ogolaanshaha qoraaga: Macallinka wuxuu yiri ma ahan qormada uu u doonayo fasalkiisa, ee wuxuu filayay wax falanqeyn ka yar, toosan, aan toosneyn, marka la soo koobo, wax yar laga tilmaamo. Sababta ugu filan ee dib loogu warshadeeyo halkan.
Post Previous" Hore Qaybta Isbarbardhiga alaabta
Post Next Dalbashada Amar DhulkaNext »